I-China yokufihla iqokobhe elingangenwa ngamanzi-ukuyeka ukuhambisa isikhwama semikhosi sokulala semikhosi yemozulu ebanda kakhulu kunye nabenzi | Xueruisha
Olu hlobo lwebhegi yokulala isetyenziselwa ukuhlala ngaphandle ngaphandle kweemeko ezishushu. Kungenxa yokuba injongo yoqobo yolu hlobo loyilo lwebhegi yokulala kukuhlangabezana neemfuno zabantu zentuthuzelo yeenkampu zangaphandle ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu, oko kukhokelela ekuphulukaneni nobushushu ngakumbi. Olu hlobo lwebhegi yokulala lunokusetyenziswa njengomqamelo ngokuvula uziphu.
Ngaba uvukile kubusuku obubandayo? Xa ulele engxoweni yokulala ententeni, ungcangcazela, ungcangcazela, ungakwazi ukulala ngokulula ngenxa yengqele, umamele umoya obandayo ngaphandle, imvula nekhephu, ngaba ufuna ibhegi enjalo yokulala ikuvumele ukonwabele ukufudumala kwimozulu ebanda kakhulu yokulala? Ngoku lixesha lokuba wenze ukhetho olufanelekileyo. Le bhegi yokufihla ukufihla yenzelwe kwaye yenziwa ngokungqinelana nengxowa yokulala yomama. Ilaphu langaphandle lenziwe ngelaphu lokuzifihla, elinyangiweyo ngobungqina bokukrazula kunye nonyango lokugxotha amanzi. Inokumelana nomoya okuhle, iyamelana nodaka kwaye akukho lula ukuyonakalisa. Ilaphu langaphakathi lithambile kwaye likhululekile, kwaye liziva lisondele kakhulu emzimbeni. Ingcaciso esisiseko yale ibhegi yokulala igcwele i-90% yedada phantsi kwe-1600g, kunye ne-bulkiness ingama-650. Ubuninzi obuphezulu kunye nenkqubo ye-3D yokufaka yenza ibhegi yokulala igcwele kakhulu, kwaye ezantsi zigcwalisa i-interlayer, okulunge ngakumbi ukugcina kushushu . Umnqwazi usebenzisa i-buckle eyomelele kakhulu, enokuyisonga ngokuqinileyo intloko kwaye iphucule kakhulu ukusongelwa ngokubanzi, okunokukunika ukufudumala kwindawo ebanda kakhulu. Le bhegi yokulala inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi ezibandayo ngaphandle kwengxaki, ngoko ke ilungele uluhlu olubanzi lweziganeko, ezinje ngenkampu yasekhaya, iipiknik, ukunyuka intaba, uphando lwezenzululwazi kwiindawo ezibandayo, umsebenzi, ukumatsha, nokumelana nokubanda kakhulu kwaye umoya. Ukuba unomdla kule ngxowa yokulala, kodwa iinkcukacha zebhegi yokulala azihlangabezani neemfuno zentengiso yakho, unokuza unxibelelane nathi. Le bhegi yokulala ixhasa ulwenziwo olunzulu. Ungakhetha ilaphu kunye nokuzaliswa kwesingxobo sokulala ngokweemfuno zakho. Ungancamathisela i-LOGO okanye iipateni ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwintengiso yakho. Wamkelekile ukudibana kunye noku-odola.
Egqithileyo Intengiso eshushu yokuntywila amanzi ebaleka iingxowa zomama ezingangeni nomoya zabazingeli bomkhosi
Okulandelayo: Imvulophu enye yokulala ibhedi yokulala ngombala oqinileyo wentwasahlobo kunye nekwindla
2019 mveliso abadala inkampu idada yangaphandle / ...
Yangaphandle ezemidlalo enemibala mummy ibhegi yokulala ukuba ...
Intengiso eshushu yokugxotha amanzi e-mu engangeni m ...
2020 umenzi eliphezulu 90% phantsi ezele slee ...